एक, यसलाई बेसरी थिचथाच पारेर प्रकट गर्ने झन्झटैबाट मुक्त हुन सकिन्छ । तर यो मलाई त्यति व्यावहारिक लागिरहेको छैन । र अर्को उपाय के भने मैले एकैचोटी माधव कमरेडकहाँ नगएर उनकै गुटको कुनै कमरेडकोमा दुःख प्रकट गर्न किन नजाने ? यही दोस्रो सोचबाट नै राम्ररी काम चल्ने भएकोले म आफ्नो दुःखसहित घरबाट निस्किएँ ।
यो कस्तो संयोग पर्‍यो भने कमरेड फलानाजस्तै कमरेड ढिस्काना पनि माधव गुटकै कमरेड हुन् । कुनै विजातीय कमरेड होइनन् । मेरो भन्नुको मतलव के हो भने उनी ओली गुट अथवा प्रचण्ड गुट अथवा झलनाथ गुट अथवा वामदेव गुट अथवा नारायणकाजी गुटका नभएर खासा माधव गुटका कमरेड हुन् । अझ कमरेड ढिस्कानालाई माधव गुटमा कमरेड फलानाभन्दा उच्च स्तरको गुटीय कमरेड मानिने गरिन्छ । त्यसकारण मैले कमरेड ढिस्कानालाई नै भेटेर आफ्नो दुःख प्रकट गर्ने निधो गरेँं । अँ, कमरेड ढिस्कानाको घर पनि यही टोलमा रहेको थाहा थिएन, अब थाहा भयो ।
कमरेड ढिस्कानाको घरमा निकै चहलपहल थियो । केही महिला र बच्चाहरू यताउता गरिरहेका थिए । एक प्रकारको रमाइलो वातावरण थियो । (यस्तै लाग्यो) । केही बेरपछि के थाहा पाएँ भने आज कमरेड ढिस्कानाको जन्मदिन हो । धत्तेरिका ! म त विलकुलै गलत समयमा आफ्नो दुःख प्रकट गर्न आइपुगेको रहेछु । त्यसैले फर्कन के लागेको थिएँ, कमरेड ढिस्काना देखापरे ।
यसपछिको कुरो के हो भने मैले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा माधव गुटका कमरेड ढिस्कानालाई ‘ह्याप्पी वर्थ डे टु यु’ भन्नुपर्‍यो । यसको बलमा उनले मलाई बैठक कोठामा लगेर केकको एक ठूलो टुक्रा खुवाए । (यति नै) । अब यसलाई म आफ्नो शौभाग्य भनुँ अथवा दुर्भाग्य, म गएको थिएँ, कमरेड माधवकुमार नेपालको घर डुबानमा परेको दुःख प्रकट गर्न, तर स्वादिष्ट केक खाएर ‘ह्याप्पी वर्थ डे’ भनी आफ्नो घर फर्किएँ । प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:४६